एउटै कोठाबाट एक महिला र तीन पुरुष पक्राउ, के थियो धन्दा ? — Imandarmedia.com
एउटै कोठाबाट एक महिला र तीन पुरुष पक्राउ, के थियो धन्दा ?
काठमाडौं। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले श्रीमान श्रीमतीलाइ पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा अन्य दुई युवा रहेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनकुटा घर भई हाल धरान -१३ मा कोठा लिई बस्ने ५० वर्षीय काले बहादुर तामाङ र कालेकी श्रीमती ३९ बर्षीया मुना तामाङ रहेका छन् ।
२० बर्षीय अभिषेक खड्का र २१ बर्षीय मौषम नेपालीलाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। लागूऔषध ब्राउनसुगरको कारोबार भई रहेको भन्ने बिशेष सूचनाका २४ गते राती पौने १२ बजे,
ईलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जाँचको क्रममा पक्राउ परेकाहरुको साथबाट २ ग्राम लागुऔषध ब्राउनसुगर फेला पारी बरामद गरीएको हो ।
लागूऔषध सहित पक्राउ परेका चारै जनालाई सुनसरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थपेर अन्य अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको भनाई छ । यस्तै विद्यार्थीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा चितवनमा चार शिक्षकसहित पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार बालिकाका आफन्तले जाहेरी दिएपछि उनीहरुलाई पक्राऊ गरिएको हो । चैत ६ गतेदेखि बाल यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा विभिन्न ठाउँबाट पाँचजनालाई पक्राऊ गरिएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा भरतपुर महानगरपालिका १३ का ५८ बर्षीय शिक्षक फणीन्द्र भट्टराई र विमलप्रसाद देवकोटा छन् । भट्टराईलाई कक्षा ४ मा पढ्दै आएकी छात्रालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको छ।
भने देवकोटालाई कक्षा ६ मा अध्ययनरत छात्रालाई पढाउने समयमा विभिन्न संवेदनशील अंगमा छोएको आरोप लागेको छ । उनीहरु दुवै जनालाई प्रहरीले चैत्र २५ गते पक्राउ गरेको हो ।
शुक्रबार जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी उनीहरुलाई थुनामा राखिएको छ । त्यस्तै चैत ६ गते कक्षा ९ मा पढ्ने छात्रालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा माडीका शिक्षक सुरज लामिछाने पक्राउ परेका छन् ।
पीडित बालिकाकी आमाले उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बाल यौन दुर्व्यवहारमा उजुरी दिएकी थिइन् । भरतपुर १४ बाट पनि एक बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक कृष्ण गुरुङ बालिका यौन दुर्व्यवहारमा पक्राउ परेका छन् ।
९ कक्षामा पढ्दै गरेकी बालिकालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा ४५ बर्षीय तुलसी महतो फक्राउ परेका हुन् । उनीहरु सबैलाई थुनामा राखी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
तेस्तै,महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्न पुरुषहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने बताएकी छिन् ।उनले अहिले पनि ९५ प्रतिशत घरमा महिलामाथि कुनै न कुनै किसिमको हिंसा भइरहेको भन्दै त्यस्तो हिंसाको अन्त्य गर्न पुरुषहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने बताइन् ।
‘अब महिलामाथिको हिंसा अन्त्य गर्न कानुनमात्रै बलियो भएर पुग्दैन, अहिले पनि ९५ प्रतिशत घरमा महिलामाथि कुनै न कुनै किसिमको हिंसा छ, त्यसैले यस्तो हिंसाको अन्त्य गर्न कानुनमात्रै भएर पुग्दैन, पुरुषलाई सचेत गराउन
आवश्यक छ, गाउँगाउँसम्म अभियान चलाउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । उनले घरभित्रैको हिंसाको जरो उखेर फ्याँक्न नसकेमा मुलुकको विकास हुन नसक्ने बताइन् । ‘घरभित्रै हिंसाको जरो छ, घरभित्र असमानताको जरो छ ।
त्यो जरोलाई घरभित्रैबाट उखेलेर फ्याँक्न नसकेसम्म, महिलाको समग्र विकास नभएसम्म समाजको विकास सम्भव छैन, देशको विकास सम्भव छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी समतामुलक समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं, त्यो भनेको
महिला पुरुष घरदेखि राज्यको उच्च तहसम्म बराबरी अधिकार प्राप्त गर्नु हो, बराबरी भूमिका प्राप्त गर्नु हो ।’
मन्त्री रेग्मीले महिलाको क्षमता विकास नभएसम्म समाजको पनि विकास नहुने बताइन् । ‘समाजको त्यतिवेला विकास हुनसक्छ, जतिबेला घरको चुलो चौकादेखि राज्यको नीतिनिर्माण तहमा महिला र पुरुषको अवस्था बराबरी हुन्छ ।
हामीले अहिले जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, यो धेरै विकसित देशभन्दा राम्रो हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले प्रतिनिधित्वमात्रै भएको छ, यो प्रतिनिधित्वलाई राज्यको नीतिनिर्माण तहमा प्रभाव बढाउन आवश्यक छ ।
राज्यको निर्णायक तहमा महिलाको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि राज्यले ध्यानदिनुपर्ने अवस्था छ। उनले स्यानेटरी प्याडमा कर लगाउन नमिल्ने बताइन् । ‘हाम्रो सरकार एउटा स्यानेटरी प्याडमा समेत कर लगाउँछ।
विदेशबाट ल्याउनेमा थोरै कर लगाए पनि हुन्छ, तर नेपालमै बनेको स्यानेटरी प्याडमा कर लगाउन पाइदैन, मैले राजस्वलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छु, उनले भनिन्।
उनले गाउँमा डोको लिएर घाँसदाउरामा खटिरहेका महिलालाई हेरेर सरकारले योजना बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले महिला मन्त्रालयलाई कम बजेट दिने गरेको भन्दै आगामी वर्षहरूमा त्यसबारे ध्यान पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
‘गत वर्ष महिला मन्त्रालयको बजेट जम्मा ८० करोडमात्रै थियो, ४५ करोड त तलब भत्तामै जान्छ, बाँकी ३५ करोड बजेटले के काम गर्ने ? मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘महिला मन्त्रालयले यो देशको ७५ प्रतिशत जनसंख्याको अभिभावक हो।
तर महिला मन्त्रालयमै सबैभन्दा कम बजेट दिने गरिएको छ, अहिले म आएपछि बजेटलाई वृद्धि गरेर एक अर्ब पुर्‍याएकी छु, आगामी वर्ष यसलाई थप वृद्धि गरियोस्।